(၃၃) နှစ်ပြည့် (၈၈၈၈) အရေးတော်ပုံအခမ်းအနားများသို့ ပေးပို့သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး… – PVTV Myanmar
(၃၃) နှစ်ပြည့် (၈၈၈၈) အရေးတော်ပုံအခမ်းအနားများသို့ ပေးပို့သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ မိန့်ခွန်း
Like – 12K Share – 1319
2021-08-08 at 9:50 AM
2021-08-08 at 10:14 AM
အာဇာနည္ မန္းဘခိုင္၏ေျမး မန္းဝင္းခိုင္သန္း ေဘးရန္ကင္း၍ သက္ရွည္ က်န္းမာပါေစဟု ေလးစားစြာျဖင့္ ဆုေတာင္းပါတယ္။
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ကို ေအာင္ရမည္။
Mary Wahwah says:
Zawmin Swe says:
2021-08-08 at 11:14 AM
ျပိ ုင္တူတြန္းရင္ ေရြ ့နိုင္ပါသည္
ဒါေျကာင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ စုေပါင္းတိုက္ရပါမည္
Denis Hilarion Penna says:
2021-08-08 at 12:20 PM
Let us pray for our fallen Heroes and Heroines of 8888 . May their blood now become the seed of Democracy which is now grown into the Spring Revolution which has the sacred duty to eliminate the oppressive and backward looking Myanmar Armed Forces headed by now Min Aung Hliang once and for all and in its place Federal Armed Forces be established which will lead too the formation of Union of Myanmar. Thanks you all the peoples of Myanmar and the expatriates and those who had given their lives for Democracy. To the death of 8888 we pray and honour all of you and the SPRING REVOLUTION who have taken the touch of Democracy we will continue to pray for you. May God shield and grant you success.
2021-08-08 at 12:43 PM
2021-08-08 at 2:42 PM
Then Swen says:
2021-08-08 at 8:06 PM
8888ကအမြစ်မပြတ်သေးတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေ 2021 မှာအမြစ်ဖြတ်မယ် ရေးတော်ပုံသိပ်မကြာခင်မှာ အောင်ပြီ အောင်ပြီ အောင်ပြီ။
ဝမ်းတူး တူးဝမ်း says:
2021-08-09 at 8:58 AM
1974က အလုပ်သမားအရေး(မီးရထားကစ)1975က ဦးသန့်အရေးလို့ယုံကြည်ပါသည်
2021-08-11 at 9:42 AM
မဂ်လာပါ ဆရာ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
2021-08-11 at 7:41 PM